Kukundikana: Microsoft Adcenter Labs uye .NET | Martech Zone
Kukundikana: Microsoft Adcenter Labs uye .NET
Muvhuro, September 8, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vanhu vanonetseka kuti sei ndisingafarire kuronga mukati ASP.NET. Imhaka yekuti pese pandinoita, ndinowana peji rekukanganisa seizvi. Ndinoona kana vanhu vakanaka vari Microsoft haikwanise kuvandudza yavo pachavo mafomu vasina kuzviita, ndichaenda sei?! Kubva kuMicrosoft Adcenter Labs Demographics Kufanotaura:
Tags: bill@tuitivegroup.comblog kutsikisamuminyfacebook widgetzvokuvongatwitter widget
WordPress: SMS Kubatanidza Plugin
Imwe Nhanho Yekuwedzera Yako Email Kubudirira
Sep 9, 2008 pa 9: 22 AM
Ini handiitore ... thats a standard kukanganisa peji. Unogona kuzviwana nechero chishandiso (PHP, Ruby, Perl, nezvimwe ...) Izvo zvakachengeteka zvakanyanya nekuti kusiyana nePHP, nekumisikidza ASP.NET inovanza meseji yekukanganisa kuti irege kuzarurirwa pasi uye inogona yako saiti kunanga kune vabiridzi.
Sep 9, 2008 pa 9: 36 AM
Iwe unogona kuwana peji rekukanganisa nechero chikuva, chechokwadi Sameer. Chichemo changu ndechekuti ndeye MICROSOFT saiti ine MICROSOFT kukanganisa. Ivo vanofanirwa kunyara kuti vaisa kunyorera izvo zvikanganiso, zvichipiwa kuti ivo ndivo vakanyora zvese IIS uye ASP.NET.
Sep 11, 2008 pa 9: 43 AM
Ndinonzwisisa pfungwa yako ikozvino. Iwe urikuti iyi chaiyo Microsoft saiti ndeyekupomedzerwa.
Zvakanaka pfungwa yako ndeyechokwadi, vanofanirwa kugadzirisa yavo yekukanganisa peji (rinova basa risinganetsi) asi kunyatsoisa mhosva paNET hazvishandisike kutaura zvishoma. Izvi zvingaite sekutaura kuti "Ini handidi zvirongwa muPHP nekuti iyo saiti yePHP ine yakajairwa kukanganisa peji"
Sep 11, 2008 pa 11: 43 AM
Ini ndakatora kuchera paMicrosoft, futi, Sameer :). Ini ndinofunga mapeji ekukanganisa muIIS maererano neASP.NET anotyisa! Mune mimwe mitauro, kusanganisira PHP, kana kukanganisa kugadzirisa kuripo, ini ndinowana ruzivo nezve iko kukanganisa. Zvinotaridzika (kwandiri) pandinoyedza neASP.NET zvese zvandingambowana izvi zvinhu zvekugadzirisa.
Sep 17, 2008 pa 11: 30 AM
Ahh okay manje ndanzwisisa. Asi ramba uchifunga nezvayo inotyisa nekugadzirwa. Ivo nemaune vanovanza chaiyo yekukanganisa meseji. Izvi zvinodaro nekuti haudi kuti kusagadzikana kwako kuve pachena kune nyika.
Chinhu chimwe chete icho neASP.NET, unoona iyo skrini yauinayo? Ingo wedzera tsikaErrors = bvisa ipapo inokupa iyo chaiyo yekukanganisa meseji.
Infact kune kunyange ipulagi uye kutamba kukanganisa kubata module iwe yaunogona kudaidzwa Elmah iyo yandinofunga yakangonaka, ndakaikurudzira kuti ishandiswe kubasa uye inotyisa. Mune ino kesi iwe unogona kuviga meseji yekukanganisa kubva kune vesaiti vashanyi, asi ichave yakanyatso kuvharwa uye inogona kutomisikidzwa yekutumira iwe email nguva dzese panowanikwa nyowani yekukanganisa meseji. Taura nezve zvinotapira 😉
PS Ini ndinodawo PHP futi, asi mushure mekushandisa .NET kwemakore maviri yakazara-nguva yakanyatsokura pandiri 🙂